Iingcebiso ezi-7 zokuSebenza ngokuThengiswa kweKhuphoni yedijithali | Martech Zone
Iingcebiso ezi-7 zokuThengiswa kweKhuphoni yedijithali esebenzayo
NgoMvulo, Matshi 23, 2015 Douglas Karr
Umhlobo olungileyo uAdam Omncinci une iqonga lokuthengisa umbhalo obona amaxabiso amangalisayo okuhlengwa kwisibonelelo sombhalo weSMS. Enye yeendlela andixelele ngayo malunga nomthengi onikezela nge yiza nomhlobo nikela apho ufumene khona ishukumisi sasimahla xa ubuzise umhlobo kulwakhiwo. Baya kuthumela isicatshulwa ngaphandle kwesiqingatha seyure ngaphambi kwesidlo sasemini kwaye kuya kubakho umgca ophuma emnyango. Ingcinga entle kuba awujolisi nje umntu ongena kwisaphulelo, ufumana umphathi omtsha oza kuzama ukutya kwakho!
Imibala, Umshicileli ophambili wekhadi eCanada, uphuhlise i-infographic ebizwa ngokuba Iikhuphoni zedijithali ziqhuba ukuThengisa ngeSelfowuni kunye ne-Omni-Channel ohamba ngokusetyenziswa kunye neenkcukacha-manani ezinxulumene neendlela zokuthengisa zekhuphoni yedijithali. I-infographic ibonelela ngezi Iingcebiso ezi-7 zokuThengiswa kweKhuphoni yedijithali esebenzayo:
Dibanisa ne-imeyile -Qiniseka ukuba amakhuphoni edijithali ayadibana kunye ne-imeyile yabathengi bakho. Ukuthabatha idilesi ye-imeyile kukunika ithuba lokuzihlaziya rhoqo kwizaphulelo nakwezaphulelo ngokunjalo!
Faka isiBheno esiBonakalayo -Bandakanya ilogo yakho okanye iifoto zeemveliso ezinesibindi, imibala ebonakalayo kunye neefonti eziza kubangela abathengi abathengi.
Abasebenzisi ekujoliswe kubo -Kujolise ekujoliseni i-geo, amashishini ayakwazi ukuthatha ithuba lendawo yabathengi ukuhambisa amatikiti xa ekufutshane!
Iqabane noMhambisi -Iinkonzo zekhuphoni zinamathuba amakhulu okusasaza ukwandisa ukufikelela kwakho.
Sebenzisa imiyalezo ebhaliweyo -Yila inkqubo yabathengi ebenza bazive ngathi bayinxalenye yeklabhu ekhethekileyo kwaye ubabonelele ngezibonelelo ezizodwa.
Khuthaza Ukwabelana -Faka amaqhosha eendaba ezentlalo ukuvumela ukwabelana ngonqakrazo olunye kumaqonga eendaba ezentlalo.
Linganisa iZiphumo -Njengoko unyuselo ngalunye lufikelela kumhla wokuphelelwa kwalo, jonga ukuba yintoni esebenzayo kunye nengasebenziyo kwaye ulungiselele iphulo lakho elilandelayo.
tags: couponintengiso yekhuphoniikhuphoni ledijithaliukuthengiswa kwekhuphoni kwidijithaliamatikiti e-imeyileamatikiti ephephandabai-SMSamatikiti esmssms izaphuleloiiklabhu zemibhaloamatikiti omyalezo obhaliweyoizaphulelo zomyalezo obhaliweyoimiyalezo ebhaliweyoimiyalezo ebhaliweyoivalpak
Mamela kwaye ujolise kumathuba kwi-Twitter nge-SocialCentiv